James Rodríguez Oo Ka Hadlay Inuu Premier League Aadayo %
James Rodríguez Oo Ka Hadlay Inuu Premier League Aadayo
James Rodríguez, ayaa wuxuu noqday mid mustaqbalkiisa ay wax badan ay ka doodaan nahda cayaaraha, laakiin wiilkaan reer Colombia ayaa wuxuu cod dheer ku sheegay inuu diyaar uyahay inuu baaqi kusii ahaado Bayern Munich, uuna ku farax-san yahay halkaas.
Wuxuu ku cel-celiyay in haba yaaraatee uusan dib ugu soo laaban doonin Madrid, maadaama lagu dayacay halkaas, islamarkaana uu ahaa mid aanan wax fursad ah lagu siin jiray, si uu ugu soo bandhigo awoodiisa ciyaareed.
“Waxaan jecleysanayaa Munich, waliba wax badan sidii aan ugu farax-sanaa Monaco iyo France ayaan ugu farax-sanahay halkaan, waxaan ka helayaa kalsooni iyo kulamo si aan umuujiyay bandhigeyga fiican,” ayuu yiri James.
“Ma beeninayo in [Santiago Bernabeu] aan ku ahaa mid ku dayacan, maxaa yeelay waxan halkaas ku ahaa dhibane, laakiin ugu dambeyn dabcigeyga ayaa icaawiyay, waana soo baxay waana noqday mid xasiloon, hada,” ayuu sii daba dhigay.
Mar la su’aalay hadii uu Premier League ku biirayo ayuu yiri: “Marnaba kuma fikirayo inaan ka dheelo Premier League, waqti xaadirkaan, waxa kaliya ee aan ka fikirayo waa inaan utartamo kooxda iyo inaan dheelo koobk aduunka.
Sikastaba, James ayaa wuxuu hada ku joogaan Bayer, heshiis labo sano oo qandaraas ah, kaasoo amaah ah, isagoona kadib marka uu dhamaado heshiiskaas awood u leh inuu si xur ah uu ku doorto midkood Real Madrid iyo Bayern Munich
Bayern MunichEPLJames RodriguezPremier LeagueReal Madrid
Yaa ugu sareeya gool dhalinta horyaalka Somalia Premier League